Eoropa Firenena amin'ny Best Weather | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Firenena amin'ny Best Weather
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 04/10/2020)
Sarotra ny hilaza izay mahaforona toy ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra Weather, ka rehefa nanomboka nanoratra Eoropa Firenena amin'ny tsara indrindra Weather dia tsy fantany ny fomba hanatonana ity. Sady koa anie, izany no olona rehetra, tsy izany? Noho izany dia nanapa-kevitra ny hametraka ny thesis amin'izany 365 andro masoandro, fahazavana tsio-drivotra sy ny ranonorana tsy misy orana ho an'ny toetrandro ny tonga lafatra, ary manomboka any.
Efa niara-nanao ny lisitry ny firenena Eoropeana mifototra amin'ny ny toetr'andro, Ary ny miakatra ho any aminareo mba hanapa-kevitra izay te handeha manaraka:
Ny 1 firenena for Eoropa Firenena amin'ny tsara indrindra Weather dia: Espaina
A Mediterane toetrandro, ny matanjaka fitaterana fotodrafitrasa, fahafahana tsara dia tsara mba handeha, isan-karazany ary koa ny mifanerasera sy ny fialam-boly, Espaina ho tsara tarehy be nofy firenena. Any in Southwestern Europe, Espaina Tena zava-dehibe ho an'ny iray amin'ireo Toerana mahafinaritra indrindra lamasinina fitsangatsanganana any Eoropa. Espaina toetr'andro miaraka amin'ny mafana, maina lohataona sy ny malemy fanahy, rainy ririnina. Koa satria Espaina no iray amin'ny lehibe indrindra firenena Eoropeana, dia manana mihoatra ny iray rivo-piainana. Noho izany, dia afaka manantena kokoa continental rivo-piainana nisy fiantraikany be teo amin'ny lemaka afovoany: hiomana ho mafana, lohataona maina sy mangatsiaka ririnina. Translation: raha toa ianao ka nankany Espaina ary drafitra amin'ny nitoetra mandritra ny volana vitsivitsy, mitondra palitao sy palitao.
Portiogaly – The 1st on Europe Countries with the Best Weather
Ho anareo izay Te fa mahazo 22 ° C eo ho eo saiky manerana ny taona iray manontolo noho ny dininy izany amin'ny 35 + ° C fiakarana, Portiogaly dia 1 amin'ny Eoropa Firenena amin'ny tsara indrindra Weather. Portiogaly dia sokajiana ho CSB rivo-piainana (io teny io dia manondro ny toetrandro mediteraneana); mahonon-tena mando iray mafana ala rivo-piainana, amin'ny lohataona maina, ary lena ririnina. Raha mandeha lamasinina, hifidy ny Portiogaly mandritra ny vanin-taona mafana. Ny volana mafana indrindra ao Portiogaly dia Jolay miaraka amin'ny antsalany ny hafanana ny 24 ° C, ary ny iray mangatsiaka indrindra no Janoary amin'ny 12 ° C. Misambotra ianao indrindra masoandro ora isan'andro tamin'ny volana Aogositra. Plus, azonao atao foana Eoropa Andrefana hitsidika lamasinina fa ny tsara indrindra fahatsapana, na inona na inona toe-piainana ny toetrandro ny firenena te-hahita anao.
Mediterane iray hafa firenena izay handao anao tia 'ity faritry ny Eoropa. Gresy no mampiavaka ny faritr'i Mediterane ny toetrandro. Mpizaha tany sy ny mponina tia azy noho ny hafanana sy maina lohataona, malemy fanahy sy rainy ririnina, ary nampahazo ny fotoana ny masoandro mandritra ny taona indrindra. Gresy dia iray monja amin'ireo Eoropa Firenena ny tsara indrindra Weather ka tsy maintsy mandeha any mihoatra ny indray mandeha mba mankasitraka tanteraka ny hatsaran-tarehiny. Raha niresaka ny rivo-piainana tonga lafatra Mediterane, fa ara-drariny ihany koa isika manonona Italia, na dia ny vanin-taona mafana dia afaka mitondra be rivotra mafana, tsy mahafinaritra Weather tsy ny olona rehetra tia.
Grande-Bretagne – The worst on the list of Europe Countries with the Best Weather
Na dia tena tsara tarehy architecturally, ara-tantara sy ny kolontsaina, Grande-Bretagne dia tsy iray amin'ireo Eoropa Firenena amin'ny tsara indrindra Weather. tsara, raha tsy tia lalandava zavona, orana, rahona fotsy, ary be dia be izay manadino ny zavatra hafa mitovy loko. Ny rivotra mando sy ny unpredictability ankapobeny dia tsy manampy na. Raha mbola manana talaky masoandro Grande-Bretagne no tsy ampoizina etsy sy eroa, dia manoro hevitra anao tsy ho (mandrakizay!) nivoaka tsy elo sy nanam T-shirt. Jereo ireo 4 fiaran-dalamby mandeha mialoha diany tena ilaina any Eoropa eo anatrehanao mandeha eo amin'ny diany.
Angamba iray amin'ireo firenena Eoropeana manaitra indrindra, Islandy prides eo amin'ny mahatalanjona fjords, tsy misy farany ny endriky ny robina maitso, oram-panala-tampon-tendrombohitra fotsy, ary mahatalanjona riandrano. Oh, aoka isika tsy hanadino ny vongan-dranomandry goavana, loharano mafana sy mifantsitsitra, ary ny sasany amin'ireo friendliest, ny olona eto amin'izao tontolo izao! Na izany aza, indrisy, ity firenena skandinavianina no malaza noho ny ampoizina mihitsy ny andro na ratsy. Islandy manana eo ho eo 320 andro rahona matevina fotsy, 215 andro orana, snowstorms, ary blizzards. Tsy ho an'ireo izay mitady ny hahazo ny talaky masoandro vacay.
Na izany aza, raha ny olona iray ny ririnina fety, Islandy ho teo an-tampon'ny ny lisitry ny Eoropa Firenena amin'ny tsara indrindra Weather.
Tadiavo ny toerana tena Eoropa Firenena ny tsara indrindra ho anao Weather! ary mankafy ny diany! Hifidy ny iray mitaingina fiaran-dalamby sy ny Bokin'i ny saran-dalana miaraka amin'ny Mamonjy Train.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-countries-best-weather%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)